UMLANDO WETHU | Abaqeqeshi abakhulu
Abaqeqeshi abakhulu > Ngathi > UMLANDO WETHU
'I-PARAMOUNT': IGAMA LETHU LENKONZO YAKHO I1944
Imbali ye-Paramount Coaches ibali elixutywe ngokugqwesileyo. Yayisungulwa ngumntu omnye kunye nokunyamezela okwakubonwe ithuba kwaye waqhubela phambili kwimpumelelo. Ilifa leParadise Boys lilonke egameni labo kunye nomsebenzi onzima owenzayo ukuze uphile kuyo.
UMnu. Joseph Grech wayengenguye kuphela umsunguli weParapount Coaches kodwa nguvulindlela oguqule inkqubo yezothutho yelizwe. Igama alinike enye yeebhasi zakhe zokuqala zatshintshela isidlaliso sentsapho yakhe yonke kwaye ziza kubonisa inkonzo yakhe ephambili kunye neyo nkampani eyakhayo.
Ukuba ngumlandeli onomdla womthendeleko welali iMosta, wayedla ngokubiza iibhasi zakhe, “Uqikelelo”, kodwa ingcebiso eyathi yenziwa ngo-1944, sisizalwane sakubona ilori yakhe entsha yanamhlanje, watshintsha ingqondo kaMnumzana Grech apho athi ishishini lakhe njenge 'Eyona nto ibalulekileyo'.
Umntu osomashishini oselula uzalwa
Umnumzana uJoseph Grech wangena kwezorhwebo esemncinci eneminyaka eyi-18. Utata wakhe wayenevenkile ethengisa izinto kodwa wayenqabile ukuba ivenkile yakhe iwele esandleni sonyana wakhe omncinci ekuqaleni. Kungenxa yesi sizathu sokuba uMnu Grech waya kusebenza njengomqhubi webhasi kunye nomntakwabo.
Ekugqibeleni, uyise wayivumela unyana ukuba asebenze ivenkile, kwaye umfana osemncinci waqala ukwandisa ishishini ngokufumana izinto ezahlukeneyo zokuthengisa. Xa kwagqitywa imfazwe waqeshwa ukuba abe ngumthengisi weempahla ezixutywayo kwi-commission basis kwi-Mosta, kwaye kamva waba ngumthengisi osemthethweni kwiidolophana ezininzi. Babenempahla ye-32 evela kwi-Thermos flasks ukuya kwisepha.
Umqhenyi ongumnikazi weebhasi
Ukudibana kwakhe okokuqala neshishini lokugcina iibhasi kweza xa wakhuthazwa ukuba athenge ibhasi eyayisebenza kwiCospicua-Valletta Route. Inombolo yokubhalisa yayiyi-3217 kwaye ixabisa i- £ 1,900. Ugqibe ekubeni ayithenge kwaye ayithengise kwakhona kwisithuba seeveki ezintandathu, esenza inzuzo eyi- $ 500.
Emva koko wenza esinye isivumelwano, ngeli xesha ethenga imvume yokuqhuba ibhasi kwindlela yeBirkirkara-Mosta. Inani leemvume lalithintelwe ngeminyaka yee-1930 ukuze usebenze ibhasi kufuneka uthenge imvume okanye ibhasi enemvume. Wathenga iphepha-mvume elingu-2806 wajika ilori yomkhosi wayifaka ebhasini. Yayiyile bhasi eyayinezinto ezintle ezazikhokelela kwigama lenkampani.
Isiqalo seNkonzo yeSikolo
UMnu Grech akazange akhangele emva koko emva koko wabuzwa ukuba asebenze imihla ngemihla yabantwana besikolo abahlala ngaphandle kweMgarr. Oku kwakukho izithuthi zokuqala eziza kunikwa. Emva koko ezinye izikolo zaqala ukucela inkonzo kunye neethenda zinikezelwa. Ukuba nguyena kuphela onako ukunikezela ngenkonzo, uMnu Grech wasebenzisa iithenda.
Njengoko inani leenqwelo zokuhamba ezijikelezayo ukuqokelela abantwana besikolo zikhule, waqulunqa inkqubo yokubala kwiimvane ukuze abantwana bakwazi ukubona ukuba yiyiphi i-van eya esikolweni. Le nkqubo yamukelwa kamva kwimizila yebhasi xa iibhasi zayeka ukuba nenkqubo yokubhala imibala, ukubonisa indlela yazo, kwaye zonke zizocwecwe.
Impumelelo kunye neZibhulo zoKhula
Umnumzana Grech uqinisekise ukuba iParamount Service ihlala ifika ngexesha kwaye ingaze ibashiye abantwana bebhadula, Ngeminyaka yoo-1960 ebenikezela ngenkonzo kuzo zonke izikolo zabucala kunye nezikolo eziqhutywa yimikhosi yaseBritane eMalta. I-Royal Navy ayisayikhuphi iminxeba yeethenda kodwa igcinwe, ihlaziya ikhontrakthi yakhe yokuloba iRoyal Marines.
Nangona i-Paramount yayineebhasi ze-27 kunye nee-vans, uMnu Grech kwafuneka athathe isivumelwano kunye nokugcina ibhizinisi liqhuba. Oku kwanikezela umngeni kunye nabanini bamabhasi kunye nabasemagunyeni basekuhlaleni oko oko uMnu Grek akwenzayo akuzange kubonwe kwisiqithi kwaye kwakungenakucatshulwa okanye kuthandwa.
Ukuseka iBusiness Coach
Xa uAgatha Barbara, owayengumphathiswa ojongene nokuthutha, wamisela intlawulo nganye ngeeyure ehambayo, uMnu Grech watshintsha uhlobo lwebhizinisi lakhe kwiibhasi ukuya kubaqeqeshi. UMnu Grech ukhumbula ukusebenza ixesha elide, iiyure ezinzima. Wayeza kuqala ngeveki kwi-6 ndiqhuba abantu base-Mosta baye eCospicua ukuba bathathe abasebenzi abomile ngoMsombuluko.
Emva koko wayeza kuhamba kathathu ngokulandelelana nabantwana besikolo kwaye emini ayehamba ngenqanawa notshintsho lwabasebenzi aye eTa Qali. Lo msebenzi unzima uhlawulelwe igama, inkonzo ebambekayo kunye nobungakanani beshishini lakhula kule minyaka idlulileyo.
Inkampani ePhambili kunye neNkxaso-mali yoQeqesho
UMnu Leo Grech, unyana kaMnu. Joseph Grech, ngoku uphethe uxanduva lweentsapho. Uye waqhubeka nokwandisa ishishini kwaye ngoku ulawula enye yezona zikhulu zendlela zokuhamba zokuhamba kwiindawo zaseMalta. Utyalo-mali lwakhe lwakutshanje luseburhulumenteni bezobugcisa beDeot kunye neSikitishi seCoach enikela amandla anokwandisiweyo kunye namanqanaba kwenkampani. Ukusebenza ezinyathelweni zikayise, uMnu. Grech uyaqhubeka nokuzimisela ekukhuliseni le shishini kwaye uqinisekise ukuba igama lezorhwebo lise 'Paramount'.
UMnu Leo Grech - umsunguli weParamount Coaches Limited.